Hogaamiyeha jilicdasani waa qaranjabiye aan dal dhisin.!!! By Zakariye Dhabarloo | Maalmahanews
Hogaamiyeha jilicdasani waa qaranjabiye aan dal dhisin.!!! By Zakariye Dhabarloo
Qalinkii: Zakariye dhabarloo
Hogaamiyaha markasta waxa lagama maarmaan ah inaanu ahaan mid quudhsi naftiisa ah iyo jilicsanaani astaan u tahay
Hogaamiyaha markasta waxa lagama maarmaan ah inaanu ahaan mid quudhsi naftiisa ah iyo jilicsanaani astaan u tahay. Astaamaha hogaanka isku kalsoon waxaa ka kaw ah inaanu madaxiisa hoos u dhigin. Se hadaad aragto hogaamiye sidaasi samaynaya waa mid dareensan inferiorty, sidaasi oo ay tahayna veiling u samaynaya diciifnimadiisa oo badinaya isduldhiga.
Wadamada political crisisku saameeyeen, ee ehelka u noqday cadaawadaha faafa iyo baaba’ qarane baaha waxyaalaha ugu waaweyn ee astaamaha uu ah waxa kamid ah hogaamiye aan alahayn awood iyo karti go’aan gaadhiseed.
Berri dhaweyd waxaa dhacday in waddankii dawladiisu burburtay ee tunisia lagu eedeeyay inuu hogaamiyihii talada loo dhiibtay taladuba ka gu’in oo xaaskiisu hogaaminaysay dawladda halka uu isagu maqaarsaar ahaa.. Si tani lamid ah waxaa dhacday in siilaanyo lagu eedeeyay eeddo kuwan lamid ah. isla jeerkaasna waxa kale oo fadeexadani saamaysay wadamo badan oo asia ah sida azerbajan oo kale oo ay gaadhay ilaa heer classified documents muhiim ah banaanka laga helo kuwaasi oo xaaskii madaxweynuhu la wadaagtay madax dawalado kale kasoo jeeda.
Go’aanku waa masiir ka ummaddi yeelato. Hogaamiyaha da’diisu weyntahayna laba mid uun baa la gudboon shacabka inay ku doortaan hogaankaasi oo kale ah: hadduu karti leeyahay iyo inay ka joogaan si aanay ugu dhicin the same hole ay wadamadaasi ku qarqameen( drowned).Cirro waa musharax inaga doonaya hogaamin se waa hogaan aad u talo liita, aad u go’aan jilicsan aadna u qabaw. Waa hogaan aan lahayn( influensive power se leh ability to be guided) awood lagu hago dadka se isagu wax haga uun ku haboon.Si aan haddaba isku waafajino waxyaalaha dhacdooyinka ah een xusaynay iyo halka uu cirro kasoo gali karo ayaa waxa iyana intaan sarre kusoo xusnay dheer inuu mar laga waraysanayay warbaahinta uu sheegay” inaanay islaantiisu ololaha saamayn ku lahayn” tani waxay ahayd wax aad u liidata oon laga filayn hogaamiye westernka waxku bartay, diblumaasina soo ahaa muddo dadkiisa la silcinayay. Waxa uu ilaaway awooda haweenka iyo cududa ay ku leeyihiin qaranka. Waxa uu doorbiday inuu xabsi (lockdown) kaga dhigo gurigeega dhexdeeda.
Haddaba, qisada cajiibka aha ayaa ah inaanu hadalkaasi cirro sidiisii u fuline waxyar kadib la arkay MARWADIISA OO DHEX BOODAYSA XAFIISYADDA AXMED DHAGAX IYO MAHAMUUD HAYBE OO OLOLE KU JIRTA!!!!Go’aan geesinimo leh bay marwo foosiyi qaadatay mar hadday burisay hadalkii odaygeega.!!!! Sida oo kale waxa laga dheehan karaa isla socodkaas foosiya awood iyo go’aan darnida cirro.
Dhanka kale , waxa qabawgiisu si ba’an u saameeyay golaha uu hagayay oo 10 sanno fadhiid ahaa oo hal sharci oo faa’ido leh usoo kordhin ummadii doortay. Lobbyingku waa waxyaalaha lagu yaqaan hogaamiyaha xataa haddii pressure ay dawladdu saarto se taasi xataa maa uu garan. Maxaa uu gartaa hogaamin ma udhisan yahay horta?. Jawaabtu waa maya ee cirro waa thecnocrat u qalma in xafiis loo dhiibo kadibna lagu dul maamulo.
Sidoo kale ee habayacsanaanta ka muuqata waxa kamid ah in aanu masuulku marna lahayn go’aano iyo daraasaddo isaga kasoo fula oo ku waajahan strategic planka uu u raacayo siyaasaddiisa iyo safaradiisa. waxa taasi kuugu marag ah sida ayna u jirinn wax hore ugu meelyaalay( predetermined ah) se kaliyaata uu yahay raaciye markasta modify gareeya uun talaabada uu qaado muuse biixi iyo hogaanka xisbiga KULMIYE OO HADDA U MUUQDA RAJADDA QARANKAN EE QABIILKA KU DHISNAYN.Cirro waxa badanka ku guira dhallinyar fara ku tiris ah, malaha mus danbeed iyo xidhayaal adag oo siyaasadeed waxaana taasi ka markhaati ah sida ay markasta ugu soo narrate gareeyaan inuu maro meelkasta oo uu muuse maro.,Hillary clinton ayaa markuu obam ka adkaaday ku calaacashay” maan lahayn dadwaaaweyn oo lobbyingkayga ka qaybqaata se waxa habeen iyo dharaarba warar qurxoon oo mediaha ah igu seexinayay dhallinyar mediaha aad u isticmaalaysay waagaygii”. Cirro wadada uu hayaa wataasi.
Isla tusaale aan ka fogayn waxa kuu ah deeqdii loogu talagay dugsi balidhiig ku yaala oo loo maray hanaan aan ahayn hanaan deeqeed se ah mana sheegasho iyo ku wiirsi. Markii iigu horaysay een arko sawirka baskaas oo ku qornayd ¥deeq ka timi xisbiga wadani ¥ waxaan moodayay inay tahay deeq dibada laga soo direy, se markii aan waxogaa intel ah sameeyay waxaan ogaaaday in hargeysa bas laga iibiyay uu ahaa!!!! Waan naxay runtii waanan u qaadsn waayay.Waayo wuxuu abuurayay qaabka ay u dhigeen (hatred politics)is necbaanshiyo ka dhex qarxa bulshada meeshaas kuwada nool ee kala aragtida ah oo ka dhigaysa wax reer wadani uun u gaara oyna raaci doonin inta aan taageersanayn maadama oo calankii wadani ku yaal. Waa iska ayaandarooyinka yaala. Waxay ku tusinaysaa khibrad la’aanta guddoomiyaha iyo in lagu guurayo!!!! Hogaamiyuhu ma ahayn inuu ahaado nin aan waxbaba ogayn oo ah maqaar laga hoos shaqaysto.
Cali samatar oo ahaa raggii somaliland xasuuqay ayaa yidhi” siyaad barre ma xumayn ee intii dambe talada ayay dhallinyari kala wareegtay oo jahawareerka keenay” weedhaha ruug cadaagaas kasoo baxaa hadday noqon waayaan dhaxal reer somaliland wax u tara oo qof aan talin talo u dhiibtaan walaahi meel fog baa laynaga raadin doonaa.
Dhanka kale guddoomiyaha huwanta ah ee wadani waa nin aan lahayn awood uu ku doodo, ku dhicisto xaqiisa, ku ilaashado awoodishiisa sidaasi oo ay tahay oo somalilaanna cadaw badan leedahay sidee baa ay kuula noqonkartaa cidkastana ula noqon kartaa inay ku aaminaan taladooda. Ma awoodo cirro inuu beeshiisa oo ah tayda ka qabto awoodaha hadduu kursiga qabto mana awoodi doono inuu #burco ka ilaaliyo inay kala noqoto berri iyo galbeed. Cirro maaha nin dhaqanka iyo dadka yaqaan markaasi waxa hubaal ah jabhaddaha aka samaysma laascaanood iyo boorama inuu afgarankari waayo dajinna kari waayo. Aan isku soo duubee malaha executive power cirro.
Dhallinyarta inta reernimada wax ku doorata waxa iga xasuusin ah qarankan jiritaankiisa ayaa ka haboon walaahi shaqo yar ood rabtid inaad hadhaw adeernimo ku heshid.Nabadda oo burburta xataa ka midhadhaka yar dhistay way ka dumi doonaan oo dulcad iyo daroor baa qaxoonti lagu noqon doonaa. Caqligu hayna shaqeeyo oo yaynaan ninka sidaas u jilcoon wax u dhiiban.
Waxaan kusoo gabogabaynayaa:
Waxa dooday dameer iyo dacawo waxaanay ku murmeen midabka daaqa. Dameerkii wuxuu ku dooday inuu yahay guduud halka ay dacawadiina tiri waa cagaar. Mudo ka bacdi waxay isula tageen boqorkii xayawaanka (libaax) si uu u kala xukumo. Kadib libaaxii markuu dhagaystay doodoodii wuxuu ku yiri dacawadii bilbaad xidhantahay, dameerkiina waad fasaxantahay.Dacawadii waxay ku dooday miyaanan sax ahayn. Libaaxii wuxuu ku yiri Haa waad saxsantahay laakin maadaama oo aad dameerba la dooday waad xidhantahay.
Zakariye cabdilaahi dhabarloo.
Phd candidate for peace and security.